Chautari Daily » फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ : तोलाको कति ?
फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ : तोलाको कति ?
काठमाण्डाै / सुनचाँदीको भाउ आज बिहीबार फेरि बढेको छ ।
सुनको भाउ आज बिहीबार तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेर ७५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो बुधबार ५ सय रुपैयाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको ७४ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।
यस्तै चाँदी आज बिहीबार तोलामा ५ रुपैयाँ बढेर तोलाको ८ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा यूके पाउण्ड र मलेसियन रिँगिट बाहेक सबै देशको विनिमयदर ओरालो लागेको छ । त्यस्तै आज बिहिबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १३ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय १४ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ। भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ४८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ।
त्यतैगरीकतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। हराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय १ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय २ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ। भने मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९५ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ। भने कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७४ रुपैयाँ ६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७६ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ। भने यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय २५ रुपैयाँ ९२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय २६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति ९ माघ २०७६, बिहीबार ०७:४७